Sénégal: Namoy ny Ainy ao anaty Haintrano Ny Ankizy eny An-dalambe ao Dakar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2013 14:42 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Català, English, Ελληνικά, Français
Farafahakeliny sivy no maty nandritra ny hain-trano tamin'ny alahady harivan'ny 4 marsa lasa teo nitranga tao amin'ny fokontanin'i Médina ao Dakar. Farafahakeliny ny sivy amin'ireo dia talibés (mpianatra ao amin'ny sekoly koranika iray).
Efa maro ny tompon'andraikitra politika no niseho sehatra tamin'ity voina ity. Avoitran'ity voina ity manko ny fahasarotam-piainana mianjady amin'ireo ankizy lazaina fa talibés ireo.
Sur son blog Hady Ba nous explique ce qu’est un talibé :
Fomba nentin-drazana eto Senegal ny fandefasan'ny ray aman-dreny ny zanany any amin'ny mpampianatra manokana mba ahafahan'izy ireo mianatra mitadidy ny Korany aloha, dia arakaraka ny itomboany (no ianarany) ny fahalalana ara-pivavahana. Mandritra ny taona voalohan'izany fianarana izany, tsy ny “mpisikidy” nametrahana ireo zaza ireo no mamahana ireo zaza ireo fa ny fikambanana (fiaraha-monina) iray manontolo. Manana vilia lalin'aty tsirairay avy ny ankizy, ary in-telo isan'andro, ireo mpianatra antsoina hoe talibés (eny mitovy fototeny amin'ny voambolana arabika taliban) ireo no mitety trano any ambonivohitra na ao an-tanàna kely ka mahazo poti-kanina angoniny amin'ny vilia lalin'aty ary mihinana … Natao hamolavolàna olona hionona amin'izay ananany, hiaritra hanoanana sy ny karazam-pahafinaretana misy eto amin'ity tany diavina ity izany fomba fanabeazana izany. Misoratra ao anatin'ny fomba fijery izao tontolo izao ananan'ny sasany sy any amin'ny tambajotra sosialy iray ka mahatonga ny fiaraha-monina iray manontolo hahatsiaro ho tompon'andraikitra amin'ireny ankizy mivezivezy ireny.
Saingy tao anatin'ny taompolo vitsivitsy izay dia nisy ny zavatra nibolisatra araka izay voatantara ao amin'ny La détresse des enfants talibés (antso famoizam-pon'ny ankizy talibés) :
Miavo-tena any amin'ny daaras (sekoly koranika) ny talibés, matetika ao amin'ny fialofana tsizarizary, tsy vita, tsy misy jiro sy misy rano, nefa dia toerana ifanontofan'ny ankizy mihoatra ny tokony ho zakan'ilay trano atoriana amin'ny tany na ambony tsihy, ary mifampitakisikisina ao. Miroborobo amin'ny toe-javatra tahaka izany ny daaras maro, ary “mpisikidy” mitady ny tombontsoan'ny tenany fa tsy izay mahasoa ny talibés no lehiben'izy ireo, satria io no loharanom-bolan'izy ireo. Eo ampelatanan'ny “maître” izay manan-jò feno amin'izy ireo ny momba ireo ankizy. Zavatra toy ny mahazatra izany fampijaliana ara-batana izany mandritra ny fampianara-pivavahana. Ao Senegal, saika ny rehetra no afa-miteny ny tenany ho “mpisikidy”, ary tsy misy ny lalàna mifehy ny daaras, tahaka ny lalàna mifehy ny toera-pampianarana mihatra amin'ny hafa. Toavina fatratra ny “mpisikidy” ary eken-teny eo amin'ny mponina.
Ho setrin'izany voina izany dia nanapa-kevitra ny handrara ny fangatahana an-dalambe ny governemanta :
Araka ny praiminisitra Abdoul Mbaye “tsy maintsy atsahatra ity fangatahana voarindra sy ity fanambakana ny ankizy avela hiaina ao anatin'ny tontolo mampihoro-koditra ity”. Ary raha hinoana ny teniny, “satria tsy azo fitahina ny senegaly ka misy ireo mpisikidy sasany tonga [mitady zaza] hatrany amin'ny firenena manodidina tahaka an'i Gambie, Guinée Bissau ary any Mali. Nanome toromarika hentitra ny Filohan'ny Repoblika : Tsy maintsy atsahatra izany fomba fanao izany. Horoahina sy hosaziana ny mpisikidy fetsifetsy…”
Fa araka ny nomarihan'ilay mpanao matoandahatsoratra Dom Bochel Guégan dia tsy vao sambany ny governemanta no efa naka fanapaha-kevitra toy izany. Te-hino ny fandrarana ny fangatahana an-dalambe ataon'ny ankizy, izy , saingy… :
Fakam-panahy ho an'ny ray aman-dreny sasany, fakam-panahy na izay sisa no azony atao, mametraka ny zanany any amin'ny fiheverana fa any no ahafahany mihinan-kanina…
Tsy isaina intsony ny zazalahy avy any ivelany, avy any Guinée sy ny hafa izay tsy maintsy haverina amin'ny fianakaviany, raha hita izy ireny…
Efa nanambara ny hamaranana ny fangatahana ataon'ireo talibés ihany koa tamin'ny 2010 i Abdoulaye Wade, filohan'ny Repoblika tamin'izany fotoana, noteren'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena izay nametraka izany ho tsy maintsy atao mialoha ny fanampiana ara-bola hafa.
Tsy naharitra ela ny fampanantenana. Hafiriana? roa na telo herinandro dia voamarikay tokoa ny tsy fahitana ireo zazalahy an-dalambe ireo, nialoha ny hiverenan'izy rehetra, ary niverina toy ny taloha indray ny zava-drehetra.
Tsy izany fahasarotana izany ihany no tsy maintsy atrehin'ny governemanta araka ny navoitran'i Hady Ba sy Dom Bochel Guégan fa tsy ela ihany koa ny vali-bontan'ny mpitari-pivavahana. Lahatsoratra roa no notononiny :
Les maitres coraniques de Touba ; Darou Moukhty, Diourbel : « Aucun daara ne sera fermé ! »
“Tsy misy daara hikatona… Lavinay ny jadon'ny Fanjakana… Te-hanao politikam-balifaty ny fanjakana… mpangataka madinika ny talibé ary mpangataka vaventy ny fanjakana… vonona izahay ny hamory ny daaras 6.666 hanao vavaka fandravana …” .
Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny collectif départemental des serignes daaras de Rufisque ary mandrahona ny hanao ady mystika amin'ny Filohan'ny Repoblika.
Misy ny manolo-kevitra ny hampidiran'ny fanjakana ao amin'ny fandaharam-pianarana ny fampianarana ara-pivavahana ; tahaka ny hevitry ny depiote Serigne Mansour Sy Djamil izay manombana fa an'ny fanjakana, izay ampangainy nisintaka tamin'ny sekoly koranika hahantra mba ho fampiroboroboana ny fanabeazana repoblikana [laika].
Sarin'ankizy eny an-dalambe ao Sénégal navoakan'i Dom Bochel Guégan. (Nahazoana alalana)
Ao amin'ny Facebook ny mpiserasera iray no maneho hevitra :
Androany maraina [12 marsa] mbola misy ankizy mifanena amiko ihany, tsy mikapa, manao akanjo tee-shirt fotsiny izay lehibe loatra, tsy voahaja mazava loatra ny fandraràna. Nilaza ny praiminisitra omaly fa efa misy ny lalàna izao (marina) ary dia ampiharina izany. Yako, fokon, adao antenaina.